राती कुन दिशामा फर्केर सुत्नु शुभ हुन्छ त ? जान्नुहोस् .. – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/राती कुन दिशामा फर्केर सुत्नु शुभ हुन्छ त ? जान्नुहोस् ..
वास्तु शास्त्रका अनुसार गहिरो निद्रामा हामी शक्ति स्रोतहरूसँग जोडिएका हुन्छौँ। यो सम्बन्धले एक शान्त र आफ्नो अस्तित्वको बारेमा उत्साहित बनाउँछ। कति लामो समय सुत्नु हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन, महत्त्वपूर्ण भनेको कति गहिरो र अप्रबन्धित निद्रा हो। शान्त र निर्बाध निद्राको लागि वास्तुमा केहि नियमहरू छन्, जसको पालना गरेर प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ र सक्रिय जीवन बिताउन सक्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
पानीको वाफ लिनुहोस्: छालामा चमक मात्र आउँदैन् फोक्सोलाई पनि हुन्छ फाइदा
आइतबार गर्नुहोस् यी काम, हप्ता भर मिल्ने छ सफलता
चिसो बढेसँगै ओंठ फूटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी जोगाउनुहोस्